Manage yako Steam account kubva kune yako Apple Tarisa neUtsi | Ndinobva mac
Manage yako Steam account kubva kune yako Apple Tarisa neHutsi
KuSoy de Mac, tinogara tichikuzivisa nezve akasiyana mahara kupihwa kana kukosha kwakakosha kwatingawana muzvitoro zvakasiyana zvemitambo zvakaita seSteam, Epic Mitambo, GOG ... Kunyangwe yakawanda yemitambo iripo ndeyePC, isu zvakare tine mitambo yeMac yatinayo, asi zvisiri muhuwandu hwakawanda.
Kana iwe uchigara uchishandisa Steam uye usingade kupotsa izvo zviripo, zviziviso zvemitengo yemitambo iwe yaunoteedzera, tarisa kana uine shamwari yakabatana ... zvingangoita kuti kana iwe zvakare uine Apple Watch, iwe unofarira mukuziva iyo Smoke application, a Unofficial kunyorera iyo inotipa isu kuwana kune yedu Steam account.
Nekuda kweichi chishandiso, tinogona kuziva nguva dzese kana shamwari dzedu dziri online kutamba, mune zita ravari kuzviita, tarisa rondedzero yemitambo iripo, kubudirira kwatakaita, mutengo wemitambo uye hunhu hwavo, tsvaga nhau dzemitambo yedu yatinofarira.
Ichi chikumbiro chisiri chepamutemo chakagadziriswa naDamien Sheridan, inogona kunge iine makumbo mapfupi, asi kana tikatarisa kuti izvozvi zvakakunda mafirita eApple, zvinoita sekunge ine ramangwana rakareba pamberi payo, sekureba Valve, muridzi weSteam, isingafarire kuvhura kunyorera kweApple Watch.
Hutsi hunowanikwa kurodha pasi paApp Store kuburikidza neiyi link Zvisinei, isu tinewo zvatinogona vhezheni yakabhadharwa (1,09 euros) iyo inotipa mabasa akadai sekugona kwekuchengetedza zvinyorwa pa iPhone yedu kuti tigone kubvunza chero nguva tisina internet yekubatanidza, mukana wekushandura ruvara rwekushandisa kweese mairi iPhone neApple Watch uyezve, it inotibvumidza kubatana pamwe nekuvandudzwa kweshoko.
Ichi chishandiso chakagadzirirwa iyo Apple Watch, nekuti iyo vhezheni ye iPhone inongotibvumidza isu kugadzirisa iyo application haitipe mukana kune yedu Steam account Pasina nguva, yeizvozvo, isu tatova neSteam application yeIOS yatinayo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Manage yako Steam account kubva kune yako Apple Tarisa neHutsi
Duramazwi, icho chikuru chisingazivikanwe muMacOS
QuickKey, yemahara kwenguva shoma